Ny tombotsoantsika - Shenzhen Polymer Battery CO., LTD
Tongasoa ny serivisy OEM & ODM bateria
Miorina amin'ny takian'ny mpanjifa, ny ekipa injeniera dia nifidy ireo sela, nanao ny BMS, nameno ny sela, nanao ny fitsapana. Izahay dia manome fahafaham-po ny mpanjifanay amin'ny vahaolana mihodina.
Kitapo bateria vita amin'ny Custom vita amin'ny sela bateria LG / Samsung / Sanyo / Panasonic / Sony.100% Antoka tena izy.
Azafady mba ampahafantaro anay maimaimpoana miaraka amin'ny tetikasan'ny bateria.
Fandefasana ara-potoana: Ao amin'ny PLM dia takatsika fa ny iray amin'ireo fitakiana lehibe indrindra an'ny mpanjifantsika dia ny ara-potoana. Izahay dia miahy ny fivoaran'ny fandefasana toy ny kalitao.
Kalitao tsara indrindra: Ny vokatra manome antoka izay manana kalitao tsara indrindra no laharam-pahamehana indrindra. Izany no antony andidiantsika foana ny mampiasa vola amin'ny teknolojia avo lenta ao amin'ny foiben'ny R&D.
Vokatra manokana: Ao anatin'izany ny banky herinaratra manerantany, PLM dia manolotra vokatra marobe tsara indrindra hanatrarana ny filàna sy ny fangatahan'ny mpanjifa mitombo.
Serivisy ho an'ny mpanjifa tena tsara: Ny olana iray miverimberina zarain'ny mpanjifanay aminay dia ny filàna traikefa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa azo itokisana ary mikarakara izay fanontaniana rehetra na aloha na aorian'ny fivarotana.
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina anao dia misy injeniera 30 eo amin'ny ekipa PLM R&D ao anatin'izany ny 5 PHD, 10 MFD ary Bachelors 15. Manodidina ny 30 ny famokarana mandeha ho azy fitaovana, fitaovana 25 nubit Semi-automatique ary 8 famokarana 8 eto aminay orinasa.